Xogo ku saabsan Coronavirus - pdf download
Xogo ku saabsan Coronavirus
Xogo ku saabsan Coronavirus - Description
Toddobaadyada soo socda, wuxuu dhammaanteen waajib naga saaran yahay inaan gacan ka geysanno joojinta faafitaanka cudurka Coronavirus (COVID - 19). 1. Sidaas darteed Maamul - goboleedka Brandenburg w Download
ama iyo kale dadka iyo ama dadka kale waa goobaha qof fayruska marka aad soo aan waxaa illaa yahay
Embed / Share - Xogo ku saabsan Coronavirus
Presentation on theme: "Xogo ku saabsan Coronavirus"— Presentation transcript
1 Xogo ku saabsan Coronavirus Toddobaa
Xogo ku saabsan Coronavirus Toddobaadyada soo socda, wuxuu dhammaanteen waajib naga saaran yahay inaan gacan ka geysanno joojinta faafitaanka cudurka Coronavirus (COVID - 19). 1. Sidaas darteed Maamul - goboleedka Brandenburg wuxuu go'aansaday: • In la xiro dhammaan xarumaha aan nololmaalmeedka lagama maarmaanka u ahayn. Shirkadaha adeeg g a ee daryeelka shaqsiyeed (tusaale ahaan timo - jareyaasha iyo goobaha is - qurxinta) waa in la xi r aa. Goobaha cuntada bisil waa inay xirnaadaan. Dalabaadka guryaha laysugu geeyo ama guryaha in lagu cuno loo qaato waa la oggolyahay. Subarmaarket - yada iyo dukaamanka nolol - maameelda iyo kuwa cabitaannada way furnaanayaan. Sidoo kale Suuqyada toddobaadleyaasha way furnaanayaan. Intaas marka laga soo tago waxaa kaloo furnaanaya ;  Farmashiyeyaasha  Meelaha daawooyinka  Kaalimaha shidaalka  Bangiyada iyo Bangiyada dhigaalka  Boostooyinka  Goobaha Nadaafadda iyo dhar - dhaqista  Dukaamanka qalabka dhismaha  Xarumaha dhaqaatiirta iyo Isbitaallada  Bakhaarrada qalabka caafimaadka  Iibka joornaallada  Isku imaanshaha in ka badan laba qofood gabi ahaan waa la mamnuucay. Waxaan dadkaas ku jirin qoysaska iyo kuwa hal guri ku wada - nool.  Taabashada dadka aan is - aqoonin waa in illaa heerka ugu hooseeya la yareeyaa. Goobaha bulshada waa in masaafo 1.50 - mitir ah ay isku jirsadaan dadka. Meelaha wax lagu sugo lama oggola in 10 qof ka badan ay markiiba joogaan. Waa mamnuuc gelista goobaha dadweynaha (sida. Jidadka, waddooyinka, barxadaha, aagagga gaadiidka iyo xadiiqooyinka) illaa laga gaaray o saqda dhaxe ee 5 - ta April, 2020. Goobaha dadweynaha waxaa loo oggol - yahay kaliya sababaha soo socda:  Dukaameysi ama waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka u ah daryeelka shaqsiyga ah.  Booqashada dhakhtarka iyo daryeelka caafimaadka  Tegista Dhakhtarka dhimirka ama Jimicsiga caafimaadka jirka haddii caafimaad ahaan si degdeg ah loogu baahan yahay  Booqashada lammaanaha nolosha, dadka da'da ah ama dadka xanuunsanaya  Raacista dadka baaritaannada u baahan iyo carruurta.  Raacista meydadka qoysaska kuu dhow iy o aaska  Isboortiga iyo luga - baxsiga hawo soo qaadashada (sida ugu fiican israaca lab a qof ama dadka guriga kugala nool)  Ballamaha deg - degga loogu baahan yahay ee xafiisyada dowliga ah, maxkamadaha iyo qareennada.
2  Waxaa sidoo kale ku jira qaadashad
 Waxaa sidoo kale ku jira qaadashada lacagah a jeegga ah iyo ceyrta ee Sooshiyaalka ama hay'adda bulshada. 2. Sidee baan ku qaadi karaa Fayruska? Fayruska waxaa la isugu gudbiyaa qof ka qof. Is - qaadsiinta waxay ku dhacdaa qunfac, hadal ama marka qof uu gacan - qaado qof kale. 3. Maxaan sameyn karaa, si aniga ama dadka kale aanay u qaadin Fayruska?  Si joogta ah gacmaha u wada dhaqo (Carruurta iyo da'yarta xitaa)  Ku qufac ama ku hindhis kaliya madiil ama xusulka oo laaban (Carruurta iyo da'yarta xitaa)  Wajiga gacmaha haku taaban  In si joogto ah qolkeyga/halka aan ku noolahay aan u nadiifiyo  Weelka, macalgooyinka iyo fargeetooyinka inaan dad kale la wadaagin  Inaan yareeyo xiriirka dadka si kasta ay macquul ku tahay. Tani waxay quseysaa goobaha dadweynaha iyo xitaa nolosha gaarka ah  Taabashada jire ed in illaa heerka ugu hooseeya la yareeyo (Ka fogow gacan - qaadka, dhunkashada iyo laab - is - galinta toddobaadyada soo socda)  Dukaameysiga ama gaadiidka dadweynaha masaafo 1.5 mitir ah u jirso dadka kale. 4. Sidoo qofku ku garan karaa inuu Fayruska qabo? Marka qofku uu qaad o Fayruska Corona, tusaale wuu qufacayaa, wuu diifayaa, dhuuntaa xanuuneysa ama wuu qandhanayaa. Wuxuu aad ugu eg - yahay hergabka. Dadka qaar way shubmayaan. Bukaannada qaar way ka daran yihiin kuwa kale; neefta ayay ku dhibtoonayaan ama sambabada ayaa caabuqaya. Marka qofka Fayruska uu qaado 14 cisho ayay qaadan kartaa inay ka soo muuqdaan calaamadaha xanuunka. 5. Maxaan sameynayaa marka calaamadaha xanuunka aan isku arko? Fadlan dhakhtarka ha aadin! La xiriir cidda mas'uulka ka ah halka aad deggan tahay ama shaqaalaha arrimaha bulshada (Sooshiyaalka) ee muhaajiriinta. Kadib cidda qaabilsan howshaas ayaa lala xiriirayaa. Haddii aad Jarmal ku hadasho, fadlan wac  dhaqtarkaaga gaarka ah  Ama garaac 116 - 117 (Taleefoon lambarka adeegga daryeelka caafimaad ee deg - degga ah). 6. Maxaan laygugu oggoleyn inaan ka boxo qoflkeyga/ kaamka/ gurigeyga? Marka cudurka uu ku haayo ama shaki uu jiro inaad qaadday, waxaad galeysaa karantiil ama go'doomin. Illaa inta aad cudurka dadka kale qaadsiin karto waxaa ku qabanaya sharci qaas ah si dadka kale loo ilaaliyo. Lama oggola muddo inaad ka baxdo goobta laguugu karantiilay illaa ay oggolaadaan maamulka halka aad deggan tahay. Wax kasta oo aad u baahan tahay qolkaaga ayaa laguugu keeni doonaa.
Download - The PPT/PDF document "Xogo ku saabsan Coronavirus" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.
Xogo ku saabsan Coronavirus - PDF Slides
Our mission at Bansen Labs is to create technologies that enable peopl - PDF Slides
We believe everyone should have access to social, recreational, and vo - PDF Slides
Developing Vaccines for the Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak - PDF Slides
Coronavirus Basic Training - PDF Slides
Coronavirus vaccine program - PDF Slides
Vizo Financial Our Response to the Coronavirus - PDF Slides
Listed below are online resources with information on the - PDF Slides
x0000x0000MINNESOTA DEPARTMENT OF HEALTHx0000x00001 of Recommendationf - PDF Slides
he Delhi Metro has decided to to limit its s - PDF Slides
Greetings from CABE - PDF Slides
usdagovcoronavirus - PDF Slides